トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Mukuru wechikoro uye mubereko wakaiswa-zvazvingava wokurarama vanoronga
Pamwe chete chikuru yakatarwa-zvazvingava wokurarama ezvinhu, ndiwo muripo zano kuti mukuru wechikoro uye mubereko wakaiswa-mwero wokurarama mamiriro ezvinhu kuti zvaishandiswa dzakawanda mutengi mari.
munhu multi-zvichida Kushandiswa raiita munorumbidzirweiko, asi kana musingadi zvakasimba kurangarira izvozvo chinhu, unofanira kuziva kuti mune zvimwe zviitiko Papera kugamuchira guru chipingamupinyi. Uyewo inguva nyore kurenda
, ngatiedzei kumira zvakasimba pamusoro urongwa kusvikira nokuripira.
vakarondedzera / chikuru yakatarwa-mwero wokurarama
chokuita / nepakati yemasiraidhi wechikoro uye mubereko twasu-mutsetse mutsividzo zano
nokuti wechikoro uye mubereko wakaiswa-mwero wokurarama
wechikoro uye mubereko wakaiswa-zvazvingava wokurarama hurongwa, chikwereti nokuti mari, ndiyo nzira kubhadhara mari yaunganidzwa vachiwedzera imwe chikamu.
kuchitendero nevatengi mari, nenzira muzviitiko zvakawanda kuti kushandiswa akadai zvikwereti kadhi, nokuti mutsividzo dzemaitirwe yokuita "chikwereti × pamwero dzose" iri Akaiswa muIndekisi, wokutanga hombe kuzopiwawo mari, mutsividzo uyewo hwava kuti ndicho huru kupfuura zvinhu zvicharatidza kuderera uwandu kudzoka maererano kunowedzera.
Kana dzakananga mienzaniso
muenzaniso yakatarwa mwero chikuru wakaiswa zvazvingava wokurarama kubva 5% nevatengi mari, akakwereta 200,000 Yen 12% wepagore mhindu, kukarukureta payakavakirwa kunova sezvinotevera iwe.
mune izvi zvinosanganisira mari dzinoshanda wechikoro uye kufarira, zviri zvinhu kusimudzira yakafanana kubhadhara mwedzi wose. Kana iwe akakwereta muna
pamusoro apa ezvinhu, nzira pakuverenga mubereko kubhadhara mumwe mwedzi uchava zvishoma.
Naizvozvo, 8000 Yen kubvisa kubva 2000 Yen kufarira kubva chemhosva yakawandisa, izvozvo uchanamatira dzaona somunhu mukuru.
sezvo zvakanakira wechikoro uye mubereko zvakanakira yakatarwa-mwero wokurarama
wechikoro uye mubereko wakaiswa-zvazvingava wokurarama mugadziriro, izvozvo ichasanganisira mashoko uwandu mari pamwedzi wakaiswa.
upenyu kunogona kuderedza anokanganisa, achakwanisa kuita chemhosva pavanenge vachironga.
mari uyewo nzira akachengeteka zvisina kugadzikana chaizvo sezvo chikamu-nguva basa.
Uyezve, kunyange kana iwe makaita nokukwereta itsva, kunobatsirawo nokuti mutoro hauzoti wakakurisa.
mari yekubhadhara pamwedzi, sezvo kuti pakutsvaga mwero uye muripo mari waiti neimwe, zvingava vo zvishoma ivo chokuita muripo kana paine kusvika pamwero vachiwana mari.
Uyezve, nokuti pane yakawanda makambani vanotofanira kuti kushandiswa yakarongwa pamari yezvikwereti iri kubhadharwa, kunoratidzwa nyore kunzwisisa uyewo pamwedzi nokuripira yatinofema.
1 mwedzi mumwe, uye ose 35 mazuva, kunoenderana kambani, nokuti kunogonawo dzibatane kuti PayDay panguva unotaurwa kubva pano, iwe haufaniri kunetseka, akadai kukanganwa kubhadhara.
zvazvakashatira wechikoro uye mubereko wakaiswa-mwero wokurarama
sezvo zvazvakashatira wechikoro uye mubereko wakaiswa-zvazvingava wokurarama maitiro, uye kwete kuita chakasimba kuzopiwawo plan, pane pfungwa iyo yava nguva refu nokukwereta. Nokuti kushandisa pamwero kugara
rinonyanya nokukwereta nechiyero, hazvizovi 0 kutoti iwe mari pamwe kusvika.
Uyezve, maererano kubhadharwa nhamba yemakore kunowedzera, zvinogonawo zvinosanganisirawo nekuipira mubereko inowedzera zvinoshamisa.
uye nekuti pane zvishoma pamwedzi mutoro, pane kudzokera chete shoma mari anopiwa, zvakakosha kubhadhara zvimwe kana paine kumahombekombe ari mari.
akadai nokuda nevatengi mari zviduku uye svikiro kadikidiki
, makambani kuti murege akanyora nezvokuzadziswa chemhosva urongwa ndiyewo Kazhinji. Kana ari
idzosei haritauri mazuva wekambani, kunyange sezvo vakanga mhando kana rendi, Kuchavawo richaramba ose zuva unodzokera chete kufarira.
uyewo kuti kubvisa imwe nehanya kwakadaro, akadai kupa tsanangudzo yokuita zvinhu pamba peji mukati kana chibvumirano, inoti boka kusarudza vanovimbika kunokosha.
wechikoro uye mubereko wakaiswa-mwero wokurarama gadziriro zvichiitirwa kuona sezvo mutsividzo avo pamusoro mumwe chikamu chikwereti. Panguva
kubhadhara, achaiswa abhadhara kufarira pamwe wechikoro, zvichava chimiro zvichawanikwa mhosva yaipedzerwa mwedzi wose.
kumukuru wechikoro uye mubereko wakaiswa-zvazvingava wokurarama hurongwa, kana mari kubhadhara pamwedzi yatarwa pane mikana yakadai kana mutoro vashoma kana nokukwereta itsva.
Ukuwo kuti, nokukwereta uye nyaya kuti inova kwenguva yakareba, akaita yakawanda nguva kubhadhara chete chimbadzo, akadai panewo kuvamirira.
kudzokera zvakasimba wechikoro kana iwe unogona kudzoka, zvichida iyi ndiyo mufundisi kutonga kana kushandisa wechikoro uye mubereko wakaiswa-mwero wokurarama hurongwa.